Frank Lampard Oo Bedelay Aragtidiisii Messi Iyo Ronaldo Ee Midka Ugu Fiican Taariikhda Kubadda Cagta - Yuu Doortay? - Laacib
HomePSGFrank Lampard Oo Bedelay Aragtidiisii Messi Iyo Ronaldo Ee Midka Ugu Fiican Taariikhda Kubadda Cagta – Yuu Doortay?
Halyeeyga kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa shaaca ka qaaday inuu bedelay aragtidiisii ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda kubadda cagta gaar ahaan marka ay noqoto kala doorashada Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo ah kuwo doodoodu in badan soo taagnayd.
Labada xiddig oo ahaa kuwo saaxada sarre ee kubadda cagta kasoo arriminayay sanado badan ayaa haysta rekoodho aad u tiro badan halka ay isku geyn 69 koob kusoo guuleysteen.
Khubarada, ciyaaryahanada iyo jamaahiirta kubadda cagta ayaa ahaa kuwo mudo dheer isku khilaafsanaa ciyaaryahanka wanaagsan Messi oo PSG ka tirsan iyo Ronaldo oo Man United qayb ka ah.
Lampard ayaa sanadkii 2020 yidhi “Waxaan dooranayaa Messi, waa hibo dabiici ah oo badhaxtiran balse waxa uu Ronaldo qabtay gabi ahaanba wax cajiib ah ayuu ahaa.”
Si kastaba, Lampard ayaa haatan sheegay inuu bedelay fikradiisii hore isla markaana uu Ronaldo horreysiinayo marka uu eego rekoodhadiisa iyo xogihiisa kala duwan gaar ahaan kulamada muhiimka ah.
“Ma ogtahay anigu markasta waxaan ahaa mid Messi doorta….kaddib waxaan daawaday doodii aad adigu (Gary Neville) la yeelatay Jamie Carragher dhawaan.” ayuu Frank yidhi isaga oo Gary Neville kala hadlayay Youtube-ka The Overlap.
“Dhab ahaan waxaan filayaa in wax soosaarka Ronaldo iyo tirooyinkiisa dhabta ah iyo goolasha uu ka dhaliyo Final-ada waaweyn iyo SemiFinalada sida aynu aragnay, waxaan filayaa inaan isaga horreysiinayo. Taasi waxay igu sababaysaa nacayb badan haatan.”
Ronaldo waa mucjisada kubada cagta
Run ahaantii meesi tiro sadex jeer ah ayaa loo qaldamay
2010 waa loo il duufay umanuu qalmin
Sidoo kale 2015 umuu qalmin tan hada ugu dambaysay 2021 si qaldan wayni ku jiro ayaa loo siiyay
Ronaldo waa ciyartoyga ugu fiican taarikhda kubada cagta
Waxanan dooranayaa Ronaldo